Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Sandals Foundation Manampy ireo mpiasan'ny fahasalamana hamerenana amin'ny laoniny
Satria ny hopitalim-panjakana manerana ny nosy dia manamafy ny fomba fioman'izy ireo hamaly ireo marary COVID-19, ny hopitalim-paritra St. Ann's Bay dia namboarin'ny Sandals Foundation miaraka amin'ny faritra mitokana sy tsy miankina mba hatao efitrano fandraisam-bahiny ho an'ireo mpitsabo sy mpitsabo mpanampy izay hiantsoana ao amin'ny Intensive Care Unit (ICU).
Ny fotodrafitrasa, izay mitentina eo amin'ny JMD $ 386,000 eo ho eo, dia nomanin'ny Sandals Foundation ho ampahany amin'ny fanampiana COVID-19 lehibe kokoa nataon'ny orinasa amerikana, Tito's Handmade Vodka. Ny sandry malala-tanana an'ny orinasan'ny vodka, Love, Tito, dia nanolotra vola mitentina US $ 25,000 hanohanana ireo mpiasa mandray vahiny ao amin'ilay nosy amin'ireo vondrom-piarahamonina miankina amin'ny fizahan-tany voakasiky ny areti-mandringana.
Ny Hopitalim-paritra St. Ann's Bay no toeram-pitsaboana lehibe COVID-19 ho an'ny olona ao amin'ny paroasy St. Ann, Portland ary St. Mary. Ny efitrano fandraisam-bahiny dia misy ampahefatry ny torimaso miaraka amina fandriana kambana, toerana malalaka misy seza telo azo soloina sy fahita lavitra ary efitrano fisakafoanana misy microwave, kettle elektronika, vata fampangatsiahana ary latabatra fisakafoana misy seza efatra.
Niresaka nandritra ny hetsika fanolorana ny zoma 8 may 2020, i Dennis Morgan, Lehiben'ny Executive Executive ao amin'ny North East Regional Health Authority dia nanamarika fa ny fanomezana dia "zava-dehibe amin'ny famporisihana ireo mpiasa eo alohanay izay manao sorona ny ainy isan'andro hikarakarana olona voan'ny virus. "
Heidi Clarke, Tale Mpanatanteraka ao amin'ny Sandals Foundation dia naneho firaisankina tamin'ireo mpiasa rehetra izay lohalaharana amin'ny ady amin'ity aretina ity.
"Faly be izahay noho ny asa izay ataon'ireo mpiasa eo amin'ny laharana voalohany mba hamonjy ain'olona sy hitondra toky ho an'ireo fianakaviana voakasik'izany. Manantena izahay fa ity efitrano fandraisam-bahiny ity dia hanampy ny mpiasan'ny hopitaly hahita fahatsapana fampiononana ao amin'ity habakabaka ity izay natao hanampiana azy ireo hiala sasatra, hiorina indray ary hanonitra indray, "hoy izy.
Ny Sandals Foundation dia namaly tamim-pahavitrihana ny filàna ara-tsosialy sy ara-toekarena marobe hatramin'ny nahatraran'ny areti-mandringana ny moron'ny nosy.
“Manohy mitady faritra hanohanana ny mponin'i Jamaika sy ireo nosy Karaiba hafa izahay ary hiara-hiasa amin'ny governemanta, fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana ary mpiara-miombon'antoka orinasa hanome izay ilain'ny be antitra sy tena marefo. Fantatsika fa ny fanidiana ny indostrian'ny fizahan-tany dia nahatonga ny fiainana ho sarotra ho an'ny fianakaviana maro ary koa hikatsahana indrindra ny fanampiana ireo vondrom-piarahamonina miankina amin'ny fizahan-tany mba ho velona, ​​"hoy i Clarke.
Bebe kokoa momba ny Sandals.
Drafitra fandraharahana momba ny fizahan-tany amin'ny vanim-potoana Pandemika